चुनाव सम्बन्धी नयाँ शक्तिको कार्ययोजना प्रस्तुत - Everest Dainik - News from Nepal
चुनाव सम्बन्धी नयाँ शक्तिको कार्ययोजना प्रस्तुत
काठमाडौं, चैत २३ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले निर्वाचन सम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारेकाे छ । नयाँ शक्ति पार्टीले तयार पारेकाे कार्ययाेजना पारित समेत भएकाे छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै नमुना गाउँपालिकाको योजना सार्वजनिक गरेको छ।
नयाँ शक्तिले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र सबैलाई सहभागी गराउने निर्वाचन चाहेको बताएको छ । नयाँ शक्ति पार्टी निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । तर सरकार र केही राजनीतिक दलहरु निर्वाचनप्रति गम्भीर नदेखिएको आरोपसमेत लगाएको छ । समयमै निर्वाचन गर्न निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको । यसैका लागि ७ बुँदे शर्तसहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस प्रदेश नम्बर २ मा नयाँ शक्तिको विजयी सुरुवात
निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नयाँ शक्तिले तयार गरेको नमुना गाउँपालिकामा प्रत्येक वडामा एउटा बाल उद्यान निर्माण, एउटा ज्येष्ठ नागरिक स्यहार केन्द्र, प्रत्येक वडामा एउटा ुवाइफाई फ्री जोन हुनेछन् । त्यस्तै गाउँपालिकासँग एउटा एम्बुलेन्स, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार स्थल, न्युनतम एउटा बैंक राख्ने लगायतका कार्यक्रम छन् ।
याे पनि पढ्नुस नयाँ शक्तिले ‘सर्प, भ्यागुतो, विच्छी चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा भाग नलिने’ !
त्यस्तै प्रत्येक टोलमा खानेपानी ट्याङ्की र घरघरमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै विद्युत नपुगेको घरमा ९० प्रतिशत सरकारी अनुदान र १० प्रतिशत घरधनीको सहयोगमा सोलारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
नयाँ शक्तिको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको निर्वाचन योजना अनुसार प्रत्येक गाउँपालिकामा १ सय र नगरपालिकामा ५ सयलाई विभिन्न क्षमता अभिवृद्धिको काममा लगाउने उल्लेख छ। ुकाष्ठ तथा फर्निचर, टेक्सटाइल, मेकानिकल सामग्री, कृषि, औजार, सिमेन्ट, साबुन, इँटा, होटल स्थापना लगायतमा क्षमता अभिवृद्धि गराउने योजना तयार गरेको हो ।
याे पनि पढ्नुस नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराई भारत जाँदै
पर्यटन विकासमा होमस्टे कार्यक्रम, कृषि विकासका लगि मलखाद, बिउबिजन, कृषि उत्पादन संकलन र बिक्री केन्द्रको स्थापना र सञ्जालन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो छ निर्वाचनसम्बन्धि नयाँ शक्तिले तयार पारेको कार्ययोजना
ट्याग्स: dr baburam bhattarai, naya shakti parti